My Blue Sky | Help Page – Somali
Had iyo jeer wac 000 xaalladaha degdegta ah Locker Room Login
Waa maxay guurka la isku khasbaa?
Waxaan ka welwelsanahay saaxiib
Haddii adiga ama saaxiibkaa aad ku jirtaan guur khasab ah ama aad ka welwelsan tihiin in guur la idinku khasbo, fadlan ogsoonow inaad caawimo heli karto kelidaana aadan ahayn.
Waxaa laga yaabaa in lagu bajiyey ama aadan hubin mustaqbilkaaga, aadna ku jaahwareersan tahay dareenkaaga iyo waajibaadkaaga. Waxaad heli kartaa caawimo adiga oo la xiriiraya mid ka mid ah nambarada boggaan ku yaalla.
Kuma xirna da’daada; wadankaad ka timid; inaad tahay nin ama naag; ama waxa dhaqankaaga ama diintaadu tahay – qofna looma ogolla inuu kugu khasbo inaad samayso guur aadan doonayn.
Calamaadaha guurka khasabka ah
Haddii qof aad taqaan uu ku jiro, ama khatar ugu jiro guur khasab ah, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay ka hadlaan xaalladooda. Haddii aad dareento waxyaallaha soo socda midkood, waxay noqon kartaa in lagu khasbay guur, ama ay khatar ugu jiraan inay galaan guur khasab ah.
Way adkaan kartaa in la aqoonsado calaamadaha guurka khasabka ah waxaadna raadin kartaa caawimo iyo talo sida ugu dhaqsa badan. Waa muhiim inaad mar walba wax u qabato sida qofka dantu ugu jirto, ama khatar ugu jira, guur khasab ah, waana inaad mar walba ka fekertaa amaankooda iyo weliba kaaga.
KU DHAWAAQID DEGDEG AH
Ku dhawaaqid degdeg ah oo ah inay is-guursanayaan iyo in aanay ku faraxsanayn guurkaas.
Waxay uga baxeen dugsiga, jaamacada ama shaqada si degdeg ah.
Muddo dheer ma aanay imaan, Dugsiga, jaamacada ama shaqada sabab la’aan.
Waxay ka cararaan guriga.
Waxaa jirta caddayn ku saabsan rabshad qoys ama dhibaatayn
Wallaalaha waaweyn gabdho ama wiilal ayaa joojiyey aadida dugsiga ama ku guursaday da’ ka yar 18 sanadood.
Marna looma ogolaan dibada inay aadaan ama badanaa qof qoyska ka tirsan ayaa raaca.
Waxay muujiyaan calaamadaha niyadjabka, wax-is-yeelida, daroogo ama isticmaalka aalkolada.
Waxay u muuqdaan kuwa cabsanaya ama ka didsan dalxiiska dibada loo aadayo ee soo socda.